UNks Gugu Mjilo nencwadi yakhe.
Umfundi owenza iziqu zobudokotela kwiSayensi Yezombusazwe uNks Gugu Mjilo ubhale incwadi ngempilo yokuphila nokukhubazeka ebizwa ngokuthi Akulahlwa Mbeleko Ngakufelwa, esuselwa kwisisho sesiZulu.
UMjilo ohamba ngesihlalo esinamasondo unaba ngokuthi kunjani ukukhubazeka, izinselelo abhekana nazo nokuthi uzinqoba kanjani. Incwadi iveza ukuthi unina wakwazi kanjani ukukhulisa ingane ekhubazekile, imvamisa kanzima kodwa ngothando. Ekugcineni uveza isimo sabantu abakhubazekile, ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya.
Incwadi yakhe uyithatha njengento yokufundisa ngokukhubazeka nokuletha ithemba kwabakhubazekile. ‘Nakuba ngikhubazekile, ngikwazile ukuzuza izinto eziningi abantu abaningi ababecabanga ukuthi zingazuzwa ngabantu abangakhubazekile. Kuyenzeka, inqobo nje uma uzimisela ngokomqondo futhi uzibekele inselelo yokwenza ngaphezu kwaloko okulindeleke kuwena, ikakhulukazi njengomuntu onokukhubazeka,’ kusho yena.
Ucwaningo lweziqu zobudokotela lukaMjilo lugxile kwizinselelo zezingane ezinokukhubazeka, ikakhulukazi indlela ezithola ngayo imfundo kusukela emazingeni aphansi kuye kwasezikhungweni zemfundo ephakeme.
Incwadi Ibiza ama-R150 ezitolo ezinkulu zezincwadi. UMjilo uyazithumela ngeposi izincwadi kanti ungathenga kuyena ngqo ngokumbhalela ku: gugumjilo293@gmail.com.